တစ်ကမ္ဘာလုံးအားပေးကြည့်ရှု့နေကြတဲ့ MISS UNIVERSE ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ PRELIMINARY COMPETITION ကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့တဲ့ သူဇာဝင့်လွင် ရဲ့ဗီဒီယို – Cele Snap
တစ်ကမ္ဘာလုံးအားပေးကြည့်ရှု့နေကြတဲ့ MISS UNIVERSE ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ PRELIMINARY COMPETITION ကိုအောင်မြင်စွာနဲ့ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့တဲ့ သူဇာဝင့်လွင် ရဲ့ဗီဒီယို
ပရိတျသတျကွီးရေ…ဒီနေ့ မွနျမာစံတျောခြိနျ မနကျခငျး( ၅ နာရီနဲ့ ၃၀ မိနဈ) ဝနျးကငျြခနျ့မှာ ကငျြးပ ပွုလုပျခဲ့တဲ့ (၆၉)ကွိမျမွောကျ Miss Universe ပွိုငျပှဲကွီးရဲ့ Preliminary Competitions ကို မွနျမာကိုယျစားပွု အလှမယျသူဇာဝငျ့လှငျကတော့အမှားအယှငျးမရှိ အောငျမွငျစှာ ကြျောဖွတျနိုငျခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။Candyလေး ကတော့ပရိသတျတှသေိကွတဲ့ တေးသံရှငျ မရေဲ့တဈဦးတညျးသောညီမလေး ဖွဈပွီး Miss Universe Myanmar 2020ရဲ့ Winner ဆုကွီးကိုထိုကျထိုကျတနျတနျရရှိခဲတဲ့အလှမယျတဈဦးပဲ ဖွဈပါ တယျ။
လကျရှိ မွနျမာနိုငျငံမှာ ဖွဈပျေါနတေဲ့အခွအေနတှေနေဲ့ပတျသတျပွီး Stress အမြိုးမြိုးရှိပမေယျ့လညျးခံစားခကျြတှကေိုမြိုသိပျကာ Miss Universe ပွိုငျပှဲကွီး အတှကျ မွနျမာတှမေကျြနှာမငယျရအောငျ ကွိုးစားပမျးစား နဲ့ ယှဉျပွိုငျနတေဲ့ အလှမယျ တဈဦး ပဲ ဖွဈပါတယျ။ဒီနေ့ မနကျခငျး မှာတော့ သူဇာဟာ Miss Universe ပွိုငျပှဲကွီး ရဲ့ စငျမွငျ့ထကျမှာလှပတဲ့ လြှောကျလှမျးတှနေဲ့အတူအမှားအယှငျးမရှိ ဖွတျကြျောနိုငျခဲ့တာတှကေိုသူမရဲ့လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာမှာ Video နဲ့တကှ ဖျောပွလာခဲ့တာပဲ ဖွဈပါ တယျ။
“Prelims experience was awesome.I’m blessed that I could make it this far. It felt surreal yet nostalgic to be on Miss Universe stage and among all these amazing women.I hope you enjoy my performance. See you again on May 16.Miss Universe ပှဲကွီးရဲ့ Preliminary competiton မှာ ရှိသမြှစိတျရောကိုယျပါနှဈပွီး သူဇာ အကောငျးဆုံးကွိုးစားခဲ့ပါတယျPrelims နဲ့ Closed door interview က result တှကေိုပေါငျးပွီး ဆနျကာတငျအယောကျ ၂၁ ကို ရှေးခယျြမှာမို့ သူဇာ့ ကို အားပေးနတေဲ့ ပရိတျသတျတှအေားလုံးအတှကျ ဝမျးသာစိတျကနြေပျစရာရလဒျကို ယူဆောငျပေးခှငျ့ရပါစလေို့လညျး ဆုတောငျးနပေါ တယျ
အားလုံး ဘေးကငျးလုံခွုံအောငျနကွေပါ ၁၆ ရကျနညေ့နေ (မွနျမာစံတျောခြိနျနဲ့ ၁၇ ရကျနေ့ မနကျ) အားလုံးနဲ့အတူတူ ပြျောရှငျခှငျ့ရခငျြပါတယျ Love you all! ……” ဆိုပွီး ဖျောပွလာခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ အောကျက ဗီဒီယို ထဲမှာ သူဇာရဲ့ Full Performance Video ကို ကွညျ့ပွီး ရငျသကျရှူ့မော လိုကျကွပါဦးနျော……….။
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…ဒီနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် မနက်ခင်း( ၅ နာရီနဲ့ ၃၀ မိနစ်) ဝန်းကျင်ခန့်မှာ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ (၆၉)ကြိမ်မြောက် Miss Universe ပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ Preliminary Competitions ကို မြန်မာကိုယ်စားပြု အလှမယ်သူဇာဝင့်လွင်ကတော့အမှားအယွင်းမရှိ အောင်မြင်စွာ ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။Candyလေး ကတော့ပရိသတ်တွေသိကြတဲ့ တေးသံရှင် မေရဲ့တစ်ဦးတည်းသောညီမလေး ဖြစ်ပြီး Miss Universe Myanmar 2020ရဲ့ Winner ဆုကြီးကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိခဲတဲ့အလှမယ်တစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး Stress အမျိုးမျိုးရှိပေမယ့်လည်းခံစားချက်တွေကိုမျိုသိပ်ကာ Miss Universe ပြိုင်ပွဲကြီး အတွက် မြန်မာတွေမျက်နှာမငယ်ရအောင် ကြိုးစားပမ်းစား နဲ့ ယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ အလှမယ် တစ်ဦး ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ မနက်ခင်း မှာတော့ သူဇာဟာ Miss Universe ပြိုင်ပွဲကြီး ရဲ့ စင်မြင့်ထက်မှာလှပတဲ့ လျှောက်လှမ်းတွေနဲ့အတူအမှားအယွင်းမရှိ ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့တာတွေကိုသူမရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ Video နဲ့တကွ ဖော်ပြလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
“Prelims experience was awesome.I’m blessed that I could make it this far. It felt surreal yet nostalgic to be on Miss Universe stage and among all these amazing women.I hope you enjoy my performance. See you again on May 16.Miss Universe ပွဲကြီးရဲ့ Preliminary competiton မှာ ရှိသမျှစိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်ပြီး သူဇာ အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ပါတယ်Prelims နဲ့ Closed door interview က result တွေကိုပေါင်းပြီး ဆန်ကာတင်အယောက် ၂၁ ကို ရွေးချယ်မှာမို့ သူဇာ့ ကို အားပေးနေတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအားလုံးအတွက် ဝမ်းသာစိတ်ကျေနပ်စရာရလဒ်ကို ယူဆောင်ပေးခွင့်ရပါစေလို့လည်း ဆုတောင်းနေပါ တယ်
အားလုံး ဘေးကင်းလုံခြုံအောင်နေကြပါ ၁၆ ရက်နေ့ညနေ (မြန်မာစံတော်ချိန်နဲ့ ၁၇ ရက်နေ့ မနက်) အားလုံးနဲ့အတူတူ ပျော်ရွှင်ခွင့်ရချင်ပါတယ် Love you all! ……” ဆိုပြီး ဖော်ပြလာခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်က ဗီဒီယို ထဲမှာ သူဇာရဲ့ Full Performance Video ကို ကြည့်ပြီး ရင်သက်ရှူ့မော လိုက်ကြပါဦးနော်……….။